Uganda oo soo dhaweeysay Milliteriga Maraykanka ee Somalia u yimid La-dagaalanka Alshabaab. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Uganda oo soo dhaweeysay Milliteriga Maraykanka ee Somalia u yimid La-dagaalanka Alshabaab.
On Apr 19, 2017 Last updated Apr 19, 2017
Afhayeenka Ciiddanka Difaaca Dadka Uganda (UPDF), Richard Karemire ayaa hadalkaasi ku sheegay Wareysi uu Khadka Telefoonka ku siiyey Wargeyska The Observer ee ka soo baxa magaalladda Kampala, wuxuuna sheegay inay Maraykanka yihiin Isbahaysiga weyn ee kaalinta ka qaata Dagaalka lagu jiro Kooxda Daacish, waa sida uu hadalka u yiri.
Afhayeenka waxa uu tilmaamay inay Ciiddanka DFS iyo kuwa Hawlgalka AMISOM wax badan ka baran doonaan Ciiddanka Maraykanka ee ku sugan Somalia, gaar ahaan Xeeladaha Cusub ee loo adeegsanayo La-dagaalanka Alshabaab.
Waxa kale oo uu sheegay in horey Amarka laga sugi jirey Waaxda Gaashaandhigga Maraykanka (The Pentagon), balse haatan Taliyayaasha Milliteriga Maraykanka ee joogta Gobalka xor u yihiin inay qaadaan Hawlgallada, waa sida uu hadalka u dhigay.
“Qof kasta oo u yimaada inuu dardar geliyo Dhismaha Awoodda Ciiddanka DFS iyo La-dagaalanka Alshabaab waa soo dhaweyn doonaa” ayuu yiri Afhayeenka Ciiddanka Difaaca Dadka Uganda (UPDF), Richard Karemire.
Isbuucii la soo dhaafay, Afhayeenka Taliska Ciiddanka Maraykanka ee Afrika, Charles Chuck Prichard ayaa sheegay inay Somalia u soo direen Tobaneeyo Ciiddamo, kuwaasi oo tababar iyo qalab siinaya Ciiddanka DFS iyo Nabad-ilaaliyaasha AMISOM, kana taageeri doona Xoojinta dhinaca Loojistikada ee Dagaalka Alshabaab.
Hawlgalka Ciiddanka Maraykanka ee jooga Somalia waxaa la filayaa in la soo gebagebeeyo dabayaaqadda bisha September ee sannadkan.
Si kastba ha ahaatee, waa markii ugu horreysay ee Ciiddan Maraykan yimaadaan Somalia, tan iyo markii Ciiddanka Maraykanak laga daad-gureeyey Somalia sannadkii 1994-kii, iyadoo 18 Askari looga dilay Hawlgal aan guuleysanin oo ay sannadkii 1993-kii la galeen Maleeshiyaddii Marxuum Jeneral Maxamed Faarax Caydiid.
Xigasho: The Observer,
Dowladda Yemen oo sheegtay inay qabteen Soomaali ka barbar dagaalamaysay Xuutiyiinta.
(SAWIRO): Shir Looga Hadlayey Tayeeynta Hay’adaha Dowladda oo Lagu Qabtay Muqdisho